Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKaela
LE PROPATI LUFIKELELO LWAMANZI Wamkelekile kwiparadesi yethu. Ezolileyo kwaye etofotofo kwigumbi lokulala eli-3 elibekwe kuMlambo iKey! Imizuzu emi-5 yokukhwela isikhephe ukusuka e-marina kwi-Highway 69, imizuzu engama-45 ukusuka kuzo zombini iParry Sound kunye neSudbury. Indawo entle engaphandle enamanzi acocekileyo okuhamba ngesikhephe kunye nokuqubha. Ukufikelela ezinye zokuloba best Southern Ontario kaThixo. Umlambo omninzi ukuze uhlolisise kunye nokufikelela kuyo yonke indlela eya eGeorgian Bay.
Ikhitshi elivulekileyo elivulekileyo elineembono ezintle zomlambo. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, isitovu, imicrowave, izixhobo, itoaster, iketile, umenzi wekofu, iimbiza neepani. Ifestile egcwele igumbi lelanga ngaphandle kwegumbi lokuhlala elinesofa yokutsala kunye nendawo yokuhlala elungele ukubukela ukutshona kwelanga. I-queen bed enye, iibhedi ezi-2 eziphindwe kabini, iibhedi ezingamawele ezi-2 kunye nebhedi yesofa. Indawo yomlilo yeenkuni ukukugcina ufudumele ngobo busuku bupholileyo! Iwasha kunye nesomisi ngaphandle kwegumbi lokuhlambela. IiDVD, istiriyo, kunye neninzi yemidlalo yebhodi yokugcina ukonwabisa ngezo ntsuku zemvula. Idokhi elide elongezelelweyo lokupaka izikhephe zakho kunye nokonwabela ukukhanya kwelanga. Indawo yaselwandle yendalo kunye nendawo eninzi yengca yokudlala imidlalo yaseyadini. Yonwabela umngangatho ongaphaya kwendlwana enemibono emangalisayo yomlambo! Okanye ubumfihlo obungakumbi kukho idesika entsha ngasemva kwendlwana yokujonga iimayile zamahlathi omhlaba. IiBBQ ezi-2 ezinepropane kunye nendawo yomlilo ngasemva. IPet Friendly.
Chitha imini yonke eCarters Key River ukonwabela umlambo obanzi (umbono ngokwawo, isikhephe esibheqayo, iphenyane, okanye isikhephe). Ukuloba okukhulu kunye neendlela ezininzi ezikufutshane kwabo banomdla ngakumbi.
Umbuki zindwendwe ngu- Kaela
Ihlala ifumaneka ngetekisi, i-imeyile okanye ngefowuni.